Nhoroondo - Hinds Feet Farm
Carolyn "Puddin" Johnson Van Yese Foil
Nyamavhuvhu 22, 1938 - Kubvumbi 28, 2010
Chiono chaPuddin Foil cheHinds' Feet Farm chakatanga muna 1984 apo mwanakomana wake mudiki, Phil, akakuvara muuropi zvinorwadza mutsaona yemotokari. Puddin akariita basa rehupenyu hwake kugadzira nharaunda ine rudo uye ine hanya apo vanopona vanogona kusvika pakugona kwavo kukuvara.
Mumwe mukadzi akasimba pakunamata, Puddin akakurudzira zita rokuti “Fazi reMhando” kubva murugwaro rweBhaibheri runowanikwa pana Habhakuki 3:19 . “Ishe Jehovha isimba rangu, anoita tsoka dzangu dzive setsoka dzenondokadzi, anondifambisa pamatunhu angu akakwirira.
Chiono chake, simba uye ushingi zvinosuwa zvikuru.
Verenga Puddin's Eulogy
Yakaendeswa ku1st Presbyterian Church, Concord
Mutero wakanaka kuna Puddin naSheri Lynch
Iyo Bob & Sheri Show pa107.9, Iyo Link
Pazasi, zvakanyorwa mumashoko ake, inyaya yaPuddin yerwendo rwake naPhil, mwanakomana wake wegotwe, akakuvadzwa zvakanyanya muuropi pazera ramakore gumi nematanhatu uye kutamburira kwake kuwana tarisiro yakanakisisa inobvira kwaari.
“Nokuti ini ndinoziva zvirongwa zvandinazvo pamusoro penyu,” ndizvo zvinotaura Jehovha, “zvirongwa zverugare uye kwete zvedambudziko kuti ndikupei ramangwana netariro. Jeremia 29:11
Gunyana 11 rinotiyeuchidza kuti nechinguvana nyika yedu inogona kuchinja. Uye, kana zvadaro, ripple mhedzisiro haiyereki uye isu tinotsvaga "nyowani yakajairika." Saka zvaive kwatiri makore anopfuura makumi maviri apfuura apo Firipi akakuvara kwakavharika uropi. Nyika yedu yakashandurwa uye taifanira kudzidza "yakajairika."
Muna 1984, pakanga pasina mamepu emigwagwa kana nzira dzerwendo rwedu, asi kutenda kusingazununguki kuti Firipi aizova neramangwana netariro. Zvaizotora mharadzano dzakawanda, nzvimbo dzokutenderera uye dzomira munzira kuti mbeu duku iyi yokutenda ikure uye itumbuke muchiratidzo cheHinds' Feet Farm. Zvakanakira uye zvakaipa zvekumira kwega kwega munzira vaive vadzidzisi vedu.
Nhanho dzedu dzekutanga dzaive panzvimbo yekushungurudzika kwenzvimbo uko kushungurudzika kwaive kukuru, asi nyasha dzaive huru. Iyi yaizova nzvimbo bedzi murwendo rwedu rwemakore 17 yaigovera nzvimbo huru uye yakasununguka yekuungana yemhuri neshamwari. Apa ndipo patakatanga kuziva kuti Firipi aisiya chiratidzo chake kwese kwaaienda. Takaudzwa kakawanda kuti rudo rwedu kuna Firipi rwakaita kuti adzoke kuupenyu uye rwakakanganisa zvakanyanya vashandi vari mukuchengeta varwere. Kugamuchira vaeni kwavo kwakava netapuro yechigarire patiri.
Kugara panzvimbo yedu yekutanga yekugadziridza kwaive kuongorora kukuru kwechokwadi. Achiri kungofenda, Firipi akarairwa nemashoko okutuka uye akaipa kuti akweshe mazino ake. Pandakapindira, mukoti akatsanangura kuti vanhu vakawanda vakakuvadzwa muuropi vakanga vane utsinye uye vaingonzwisisa mutauro mumwe chete. Akatsiviwa, asi takakurumidza kudzidza chimwe chinhu nezve stereotyping, a kudiwa kwemurwere kwekurevererwa kwakasimba uye nguva isina tsitsi yekugara kwemurwere. Varapi vaive shasha asi Firipi akanga asingachanyanyi kufamba.
Pakurudziro yakasimba yaPhilip's neuropsychologist yekuti imwe nzvimbo yezvokurapa ndiyo yaive yakanakisa, takatamira kuHouston, Texas. The makamuri makuru uye chiedza chechisikigo yenzvimbo yedu yokugadziridza yakatsiviwa nepenye uye nemakamuri akamanikana epachipatara. Asi, iyo superb interdisciplinary program uye rudo rusina magumo uye kutarisirwa kwevagari vemuHouston vakanditora zvakatichengeta takadzikama munguva dzakaoma. Philip akaita tsaona dzakaipa dzinoverengeka, dzaigona kudzivirirwa, imwe yakaguma nokuvhiyiwa kwemaawa maviri. Ndaifanira kutarisana nechokwadi chokuti vashandi havagari vachiverenga kana kutevedzera mirairo uye kuti zvakanakisisa hazvina kumbokwana zvakakwana kumwana wako. Zvaiita sekuti murwere wese aifambira mberi kupfuura Philip, uye wachi yaifamba.
Takadzokera kunzvimbo yedu yokurerutsa kuti tienderere mberi nokurapa, tichiziva kuti taida chimwe chinhu chiri nani kupfuura chakanakisisa. Takabvunza kuti toenda kupi; hapana aiziva. Boka rakapiwa basa rokunzvera uye rakauya nemikana miviri, imwe muAtlanta uye imwe muIllinois. Mumhepo makanga muine kusawirirana uye vashandi vakakonzera kusawirirana pakati pangu naMartin. Ndakapinda muhotera kwevhiki kuti ndimbotonhorwa ndofunga nezvazvo basa rinoera revanopa utano kuti vasunge mhuri.
Kwaive kupi ZvaPhilip ramangwana netariro? Ndakanga ndisingazivi, asi ndakanga ndava kutanga kuona zvakanakisisa uye zvakaipisisa zvezvirongwa zvekudzorera uye kunzwa kukura kwembeu diki iyoyo.
Takashanyira sarudzo. Ndakanamata nzira yose kuCarbondale, Illinois - mundege yaienda kuSt. mubhazi kuenda kunhandare yendege; mu "puddle jumper" kusvika kunze kweguta; uye, mumotokari yokurenda kuenda kunzvimbo yeIllinois: “Ishe, manzwiro angu adzikatidza kutonga kwangu. Ndapota ndiudzei kwekuenda. Zvijekese. Inyore nemabhii makuru matsvuku anondibata kumeso kuti ndisazvipotsa!” Mushure mekuona nzvimbo iyi uye nekutarisa mumotel, takatenderera tichienda kukamuri redu ndokumisa mota panzvimbo yaiwanikwa. Pamberi pedu chaipo pakanga paine tangi hombe repeturu pamakumbo rine “GO ATLANTA” rakapendwa neruvara rutsvuku.
"Jehovha Mwari isimba rangu, Anoita tsoka dzangu dzive setsoka dzenondokadzi, Anondifambisa pamatunhu angu akakwirira." Habhakuki 3:19 KJV
Nzvimbo yeAtlanta yaive nyowani, yakakura, ine simba uye ine hunyanzvi. Firipi akatanga kutora matanho echokwadi, asi izvo zvakatanga zvakanaka zvakaguma zvakashata sezvo "mutsetse wepasi" wakatanga kutonga: kuderedzwa kwehutano uye huwandu hwevashandi. Taienda kuAtlanta mazuva gumi oga oga, uye kumwe kupera kwevhiki kumwe chete takawana Philip akuvadzwa uye arohwa nomumwe waaigara naye aiva nechisimba kana munhu akamubata. Zvimwe zvinhu hazvitaurike. Philip aida boka revezera munzvimbo umo hunhu, hunhu, uye kugarisana kwakanyatsoongororwa nekuongororwa.. Kufambira mberi kwake kwakadzikira sezvo kutya kwedu kwakawedzera.
Asati adzoka kumba mukuvamba kwa1993, nzvimbo dzaPhilip dzokupedzisira dzakanga dziri muDurham, kutanga murehab uye, gare gare, muimba yokugara inobetserwa. Iyo rehab nzvimbo yaive nezvakawanda zvakanaka zvikamu: kurapa kwakasimba, chiitiko chepamusoro, boka revezera uye Gary, waunogara naye akakwana. Philip naGary vakabudirira uye vakafambira mberi kusvikira vatamisirwa muimba yokugara inobatsirwa.
Imba yekugara inobatsirwa muDurham yaive diki, vagari vayo vasingagamuchirwe munharaunda uye pakupedzisira dambudziko revashandi. Apa ndipo pakaita kukuvara kwegokora kunotyisa kwaPhilip, izvo zvatakaona apo chipatara chakafonera bhizinesi raMartin kuti atarise mari yeinishuwarenzi. Kukuvara kwacho kwaive kwakanyanya zvekuti zvakatora mukuru wekuvhiya kwepurasitiki kuDuke kwemaawa matanhatu kuti agadzirise. Chiremba wacho ainetseka kuti nzvimbo yaaizovhiyiwa yaisazopindwa zvakanaka zvokuti akazvipira kuita basa rake nerekiriniki yake kuti aongorore nokusunga ronda racho kusvikira rapora. Yakanga iri tsaona isingakanganwike sezvakaita kushaya mvura nemvura kwakazoitwa naPhilip. Yakanga yave nguva yekudzokera kumba, makore mapfumbamwe murwendo.
Ipapo Jehovha akandipindura, akati, Nyora zvawaratidzwa, zvinyore pamabwendefa, kuti unorava amhanye; nekuti zvakaratidzwa izvi ndezvenguva yakatarwa, zvovavarira kuchinangwa, uye hazvingaperi. inononoka, imirire, nekuti ichauya zvirokwazvo, hainonoki. Habhakuki 2:2-3 BSN
Tichitarira shure, zviri pachena kuti mharadzano, nzvimbo dzokutenderera uye dzokumira parwendo rwedu zvakanga zviri zvikwangwani nezvikwangwani, zvaitungamirira nokurondedzera hurongwa hwaMwari hwenguva yaFiripi nenguva yake yemberi.
Ini naMartin takatanga kutsvaka nzvimbo kwenguva refu. Kwemakore anoverengeka, pasina zvazvakabatsira, takatsvaka nzvimbo munzvimbo yeMt. Pleasant. Mamwe mangwanani-ngwanani, ndakamutswa nemashoko airova mumwoyo mangu okuti: “Uri kutarira divi risiri iro!” Ndakabva ndanzwisisa. Taida nzvimbo hombe yevhu munzvimbo yakagadzwa, maminetsi kubva kune zvese zvinobatsira uye zvinodikanwa izvo munhu angatarisira.
Martin akafonera shamwari yake. Pandakaona nzvimbo iyi, kunyange isingatengeswi, ndakaziva kuti ndiyo. Mumazuva mashomanana, yakanga yava yedu uye mugore iroro, takanga tava nechikamu chechipiri.
Ndakange zvino ndave mudumbu nechiratidzo chandakange ndisisina simba rekununura. Zvakare, ndakamutswa neinzwi: “Bvunza Marty.” Kumbira Marty kusiya basa rinobhadhara, rinovimbisa mubhizinesi rekuvandudza software yekombuta? Handina kuziva kuti Marty nemudzimai wake Lisa vakanga vatanga kunyengetera gore rakanga rapfuura kuti vawane mukana webasa waizomubvumira kupedza nguva yakawanda nemhuri yake. Kana neniwo handina kuziva kuti vaida kuita chinhu chakakosha sei kuna Firipi.
Ipapo Jehovha akati kwandiri, “Waona zvakanaka, nokuti ndinosvinurira shoko rangu kuti ndiriite.” Jeremia 1:12
Ndakakomborerwa navarume vatatu vakachenjera avo vakandibetsera kubatisisa kuchiono: Firipi, nomudzimu wake usingazununguki worudo, shiviriro, mutsa, unyoro norunako; Martin, nerudo rwake rusingaperi uye basa rakasimba achimiririra vakakuvadzwa uropi; naMarty, nekuzvipira kusingafi kumhuri, shamwari nechechi uye kugona kwake kunoshamisa kubata chero chinhu nekuchiita nemazvo.
Tangotanga, asi nevarume vatatu vakachenjera, boka rinosiyanisa, boka revanozvipira, uye tsigiro yeshamwari, chiono chacho chichazadzika.
Carolyn Van Yese Foil
“Ngatisimukei tivake.” Saka vakaisa maoko avo pabasa rakanaka. Nehemia 2:18 BSN